HORDHAC: Manchester United v Wolverhampton Wanderers - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
HORDHAC: Manchester United v Wolverhampton Wanderers
September 22, 2018 at 06:35 HORDHAC: Manchester United v Wolverhampton Wanderers2018-09-22T06:35:58+00:00 CAYAARAHA
( Premier League ) 22 Sab 2018. Manchester united ayaa Garoonkeeda ku qaabili doonta kooxda Wolverhampton Wanderers kulamada todobaad lixaad ee cayaaraha Premier League.
United ayaa dib ugu soo laabtay wadada guusha kaddib guuldarooyin xariir oo soo wajahay inkastoo bartamada asbuucii hore ay guul raaxo ah ku daah furteen koobka kooxaha yurub.
Marcus Rashford iyo Nemanja Matic ayaa ka ganaaxan Manchester United, halka Ander Herrera iyo Marcos Rojo aysan weli aheyn kuwa ku filan iney cayaaran.
Phil Jones ayaa laga yabaa inuu kasoo laabto dhibaato muruqaa, halka Jesse Lingard iyo Antonio Valencia ayaa lala xariirinayaa inay cayaraan kaddib markii la nasiyay kulankii bartamaha todobaadkii hore.
Diogo Dalot ayaa wacdaro dhigay cayaartiisi ugu horreysay ee uu wajahay kooxda Young Boys laakiin bilaabashadiisa xigtaa waa dheesha talaadada ee koobka Carabao Cup.
Wolves ayay suuragal tahay inay safkeeda u magacaabaan koox isku mida lix kulan xariira horyaalka Premier League.
Ivan Cavaleiro ayaa la filyaa inuu yahay kaliya laacibka ka maqan isagoo sii wata kabasho dhaawac uu ka qabo dhabarka.
Wolves guushii ugu dambeysay oo iyada oo martiya ay ka gaartay Manchester United ayaa aheyd kulan horyaalka heerka kowaad oo dhacay 9kii February 1980, Markaana waxaa goolka kaliya ay ku badiyeen u dhaliyay Melvyn Eves.
Intaa kaddib waxay ku guuldareysteen siddeed dheel oo ay marti u ahaayeen Red Devils kulamada horyaalka iyo Koobabka.
United ayaa qasaartay labo kamida shantii kulan ee ugu dambeysay horyaalka gurigeeda, taa oo ka badan kulamada ay ku guuldareysatay Old Trafford 43kii cayaar oo hore.
Iyagu waxa ay ka fogaanayaan inay si xariira ugu guuldareystaan garoonkooda markii ugu horreysay tan iyo bishii March 2014, markaa oo qasaaro 3-0 kala kulantay labada koox ee Liverpool iyo Manchester City.
Kooxda Wolves ayaa laga yaabi karaa inay badiyaan cayaartii seddaxaad oo xariira kulamada horyaalka sare markii ugu horreysay tan iyo bishii March 1980.
« Soomaali sakhraansan oo xanaaq dartii gaari jiirsiiyay dad ku sugnaa goob kalaab ah: VIDEO
HORDHAC: Liverpool v Southampton »